China Rubber Disc Dzorera Roller Kugadzira uye Fekitori | Joyroll
Irabha dhisiki yekudzoka roller inodzivirira iyo yekuvaka yezvinhu iyo inogona kuiswa pane roller nzvimbo iyo inogona kukonzera iyo roller dhayamita kukudziridza isina kujairika yakasakara pamusoro uye shanduko chimiro. Izvi zvinowanzo kuve chikonzero chikuru chekukanganisa bhandi. JOYROLL rabha disc kudzoka roller iri yakavimbika uye yakapusa yekugadzirisa mhinduro kune ino yakajairika bhandi conveyor dambudziko.
Irabha dhisiki yekudzoka roller inodzivirira iyo yekuvaka yezvinhu iyo inogona kuiswa pane roller nzvimbo iyo inogona kukonzera iyo roller dhayamita kukudziridza isina kujairika yakasakara pamusoro uye shanduko chimiro. Izvi zvinowanzo kuve chikonzero chikuru chekukanganisa bhandi. JOYROLL rubber disc disc roller ndeye yakavimbika uye yakapusa yekugadzirisa mhinduro kune ino yakajairika bhandi conveyor dambudziko.
Nongedzo:Roller dhayamita: 89, 102, 108, 114, 127, 133, 140, 152, 159, 165, 178, 194, 219mmRoller Length: 100-2400mm.Shaft dhayamita: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50mm Kubereka Type: 6204, 6205, 6305, 6206, 6306, 6307, 6308, 6309, 6310Surface Treatment: Paint Spraying, Electrostatic Powder Coating, Galvanization.Standard: DIN, CEMA, JIS, AS, SANS-SABS, GOST, AFNOR nezvimwe.
Asina-tsvimbo roller roller kumusoro
Mutengo kusevha kwekutsiva rollers ane mashoma kukundikana uye kugadzirisa mahara;
Yakanakira kudzoka bhandi kutakura matambudziko;
Zvakanyanya-inoshanda labyrinth zvisimbiso zvinodzivirirwa kubva kuguruva & mvura kupinda mukutakura;
Yakagadzirwa uye inogadzirwa kwehurefu, husina matambudziko hupenyu;
Kugadziriswa-kwemahara, yemhando yepamusoro yakavharwa bhora rinotakura.
Pashure: Dhiraivha Pulley